ॐॐ लेखि शेयर गर्नुस !! दुःखबाट मुक्ति पाउन, सन्तान लाभ हुन, पदोन्नति हुन, नि’रो’गी हुन यो मन्दिरमा एकपटक दर्शन गर्न पुग्ने हरेकको मनोकामना पुरा हुन्छन् ! जानी राखौ - Nawalpur Dainik
ॐॐ लेखि शेयर गर्नुस !! दुःखबाट मुक्ति पाउन, सन्तान लाभ हुन, पदोन्नति हुन, नि’रो’गी हुन यो मन्दिरमा एकपटक दर्शन गर्न पुग्ने हरेकको मनोकामना पुरा हुन्छन् ! जानी राखौ
गुफाभित्रको मन्द उज्यालो र समथर ठाउँमा महादेव र गणेशको प्राकृतिक मूर्ति एकैठाउँ अवस्थित छ । त्यहाँबाट दक्षिणतर्फको भित्तामा पार्वतीस्थान छ । सो स्थानमा पार्वतीले गणेशजीका लागि दूध ल्याइरहेको जस्तो आकृति छ, जहाँ निःसन्तानले सन्तान माग्ने चलन छ । गुफाभित्रको उत्तरी कुनामा धर्मद्वा’र, पापद्वार छ । त्यस द्वा’रबाट धर्मात्माहरू छिर्न सक्ने र अधर्मी छिर्न नसक्ने किंम्वदन्ती छ ।
यसबाहेक जन्मद्वा’र, स्वर्गद्वा’र, कर्मद्वा’र, तेत्तीसकोटी देवताका प्रतिमूर्ति लगायतका विशेष महत्वका ढुंगाका प्राकृतिक मूर्तिसमेत गुफाभित्र छन् । यहाँ एउटा चट्टानै चट्टानको थुम्को परेको डाँडामा अवस्थित छ । यस थुम्कोलाई कैलाशपर्वत भन्ने गरिन्छ । यो थुम्कोको परिधी झन्डै एक किलोमीटर जति छ र उचाई २०० फिट जति छ । यो थुम्कोमा अर्को एउटा ठूलो गुफा छ ।
यसको ठीक माथि गुफाको सिलि’ङ चुनढुंगा पग्लिंदै गरेको जस्तो घो’प्टे चुच्चाहरू छन् जसबाट निरन्तर चौलेनी रङ्गको पानी तप्किरहेको हुन्छ । माथिका चुच्चाहरू कामधेनुको थुन र पानीलाई उनैका दु’ध महादेवलाई स्ना’न गराउन खसेको हो भन्ने किमवदन्ती र जनविश्वास छ । मूर्ति वरीपरीका भाग मैदान परेको छ । यसलाई पहिले बाहिरबाट माटो ल्याई पुरेर बनाइएको हुनसक्छ ।
यस मैदानी मागमा एकै चोटी बीसौं रुद्रीहरू गर्न सकिन्छ । गुफाको सतहसम्म वर्लनको लागि कृतिम १०२ वटा खुड्किलाहरू बनाइएका छन् जो भर्यांग जत्तिकै ठा’डो कोणमा छ । गुफाका शिलिङ र भित्ताहमा चट्टान पग्लिएर झरेका जस्ता धेरै आकृतिहरू छन् । कहीं मूर्तिहरू जस्ता बनेका छन् । कहीं माथिबाट चुहिएका भागलाई तलबाट चुलिएका चोसोले छोएर दुलाहरू बनेका छन् ।
ती मूर्तिहरू जस्ता आकृतिहरूलाई महादेवका परिवार सप्तर्षी नन्दी भृं’गी र तेत्तिसकोटी देउताहरू भनेर पूज्ने गरिन्छ भने दुलाहरूलाई पापद्वा’र धर्मद्वा’र जन्मद्वार घो’प्टे द्वा’र आदि भनेर पूज्ने र छिर्ने गरिन्छ । त्यस्ता द्वा’रबाट धर्मात्माहरू मात्र छि र्न सक्छन् र पापीहरू बीचमा अड्कन्छन् भन्ने धार्मिक विश्वास छ ।
त्यसैले यस लाई भष्मासुर गुफा पनि भनिन्छ । यहाँ राम नवमी, बाला चतुर्दशी, शिवरात्री र तीज गरी वर्षमा चारपटक ठूला मेला लाग्ने हलेसीमा विभिन्न मुलुकबाट समेत तीर्थयात्री तथा पर्यटक आउने गर्छन् । हलेसी महादेवको पूजा गरे मनोकांक्षा पूरा हुने जनविश्वास रहिआएको छ। * यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला *
Prevशास्त्रले भन्छ: सुत्नुपूर्व यो मन्त्र जप गर्नुहोस् लाभ मिल्नेछ
Nextजेठ ०६ गते बिहिबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल